Mohamed Salah Oo Liverpool Ka Caawiyay Guul Ay Ka Gaadhay West Ham. – Kooxda.com
HomePremier LeagueMohamed Salah Oo Liverpool Ka Caawiyay Guul Ay Ka Gaadhay West Ham.
Mohamed Salah Oo Liverpool Ka Caawiyay Guul Ay Ka Gaadhay West Ham.
January 31, 2021 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta 0
Liverpool ayaa guul dahabi kasoo gaadhay West Ham United oo ay ugu tagtay magaalada London, halkaas oo guushii labaad muddo afar maalmood gudahood ah ay kasoo hoysay.
Reds oo ka walaacsanayd dhaawacyo cusub oo kusoo kordhay oo ahaa in Sadio Mane aanu kulankan joogin, ayaa waxay heshay guushii labaad ee sannadkan 2021, iyadoo 3-1 ku garaacday West Ham.
Qaybtii hore ee ciyaartan ayay labada kooxood awoodi waayeen inay wax goolal ah kala dhaliyaan, laakiin markii lagu soo laabtay qaybta dambe ayuu Klopp sameeyey beddello u furfuray ciyaarta, kuwaas oo guusha ku hoggaamiyey.
Daqiiqaddii 57aad ayuu Mohamed Salah u dhaliyey goolka koowaad, waxaanu mid labaad ku daray daqiiqaddii 68aad ka hor intii aanu Wijanldum ciyaarta oo ay lix daqiiqadood ka dhiman tahay u saxeexin goolka saddexaad ee ciyaarta.
West Ham ayaa heshay gool madi ah oo uu u dhaliyey Dawson, waxaanay ciyaartu kusoo idlaatay 3-1.
Liverpool ayaa soo gashay kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League waxaanay yeelatay 40 dhibcood, iyadoo hal dhibic ka dambaysa Manchester United oo labaad ku jirta iyo afar ay ka dambayso Man City.
Jurgen Klopp ayaa isbeddelo ku sameeyey shaxdii uu kula ciyaaray Tottenham kulankii ugu dambeeyey ee guusha weyn ay soo hooyeen, waxaana safkiisa ka baxay Joel Matip oo dhaawac ah, kaas oo uu beddelay Phillips.
Waxa kale oo safka Klopp ka maqnaa Sadio Mane oo dhaawac ku seegay ciyaartan kaas oo uu beddelay Shaqiri, halka Firmino uu kaydka fadhiyey qaybta hore oo uu kasoo hormaray Origi.
Liverpool ayaa ciyaarta ku bilaabatay inay si buuxda maamulkeeda gacanta ugu dhigto, iyadoo samaynaysay kubbad isku dhiib mar gaadhay in 30 baas ay ciyaartoydu isgaadhsiiyaan ka hor intii aanay isku dayin inay goolka West Ham weeraraan.
Origi ayaa daqiiqaddii shanaad tijaabiyey goolka West Ham, waxaana kubbad uu u dhiibay Shaqiri oo meel dhinac ahayd uu ku toogtay goolka, balse waxay ka leexatay bartilmaameedkiisii.
Wijnaldum ayaa isaguna kubbad ku toogtay goolhaye Fabianski, waxaase kubaddaasi ay dul martay birta.
Fursaddii ugu horreysay ciyaarta waxa heshay West Ham United oo ku dhowaatay inay soo taabato shabaqa Liverpool, waxaana kubbad ay isku dhiibeen Cresswell iyo Fornals ay xerada ganaaxa ugu geeyeen Benrahma. Weeraryahanka reer Algeria ayaan kubadda si fiican u maamulin, waxaana sidoo kale ay sii gaadhay Antionio balse isku qabsigooda ayay ka faa’iidaysteen difaaca Liverpool.
Liverpool oo 30 kubbadood isku soo dhiibtay ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey qaybta hore waxay kubbadda kusoo tuureen xerada ganaaxa ee West Ham, waxaana goolhaye Fabianski uga lug horreeyey Origi oo isku tuuray, balse kubadda ayaa birta garab martay. Qaybta hore ayaa kusoo dhamaatay goolal la’aan.
Qaybta labaad ayay kooxda martida ahayd dardar lasoo gashay garoonka, waxaana kubbad uu dhinaca bidix ka keenay Origi ay sii dhaaftay Cresswell oo seexday, waxaanay u tagtay Salah, balse may noqonin gool.
Jurgen Klopp ayaa daqiiqaddii 57aad sameeyey beddelkiisii ugu horreeyey ee ciyaarta, waxaanu bannaanka dhigay Milner isagoo soo geliyey da’yarka kasoo baxay kulliyadda naadiga ee Curtis Jones.
Tababaraha ayaa isku dayey inuu Milner u sharraxo sababta uu usoo beddelay, waxaana hadalkooda oo aan afka ka damaanin garoonka beddelay da’yarkii soo galay.
GOOOOAAAAAL! Jones ayaa kubbad uu dhexda ka qaatay waxa uu saddex jeer usii dhiibay asxaabtiisa, ugu dambayntiina waxa uu xerada ganaaxa oo dhinaca midig ah ugu geeyey Mohamed Salah oo isaguna soo farsameeyey difaacyahannada isla markaana saxeexay goolka koowaad ee ciyaarta.
Milner ayaa dib usoo cararay isaga oo aan fadhiisanin, waxaanu u yimid Klopp oo ay wada dabbaal-dageen.
Curtis Jones oo ay da’diisu tahay 20 sannadood iyo 1 maalin, ayaa noqday ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee gool Premier League ah caawiya tan iyo September 2018, markaas oo Trent Alexander-Arnold oo ay da’diisu ahayd 19 sannadood iyo 350 maalmood uu caawiyey gool.
Rikoodhka kale ee Curtis sameeyey ayaa ah inuu caawintan sameeyey isagoo garoonka ku jiray 34 ilbidhiqsi oo kaliya.
Mohamed Salah ayaa gool labaad u dhaliyey Liverpool daqiiqaddii 68aad kaddib markii uu helay kubad uu si layaable ugu keenay Xherdan Shaqiri oo meel fog uga soo qaaday kubadda, waxaanu Salah si fudud u daba-mariyey goolhaye Fabianski.
Jurgen Klopp oo ku najaxay beddelkii hore ee uu sameeyey ee Jones, ayaa waxa uu mar kale keenay Roberto Firmino daqiiqaddii 71aad isagoo beddelay caawiye Shaqiri.
GOOAAAAAAAL! Daqiiqaddii 84aad ayaa kubbad ay kasoo wada shaqeeyeen Alexander-Arnold, Curtis Jones iyo Roberto Firmino ay lugta u gashay Wijnaldum oo meel bannaan uu laacibka reer Brazil kubadda ugu geeyey, waxaanu si fudud ugu leexiyey kubadda goolka, iyadoo ciyaartuna noqotay 3-0.
West Ham United ayaa gool madi ah la timid ciyaarta oo ay saddex daqiiqadood ka hadhsan yihiin, waxaana kubbaddan oo koorne ahayd madaxa ku qabtay Dawson iyadoo uu sababteedana lahaa Robertson.
Thomas Tuchel: Halkan Arin Ayaa Looga Baahanyahay Timo Werner.
Dib U Eegid: Mohamed Salah Oo Boodhka Ka Jaftay Rikoodh Laga Dhigay Liverpool
FALAANQEYNTA CIYAARAHA:Maxaa United Guusha City Ka Caawiyay Dhiiga Baxa Liverpool , Atleticovs Real